Walter Scott. Ọtụtụ mmegharị ihe nkiri nke ọrụ ya | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ndị edemede, Akwụkwọ, Novela, Akwụkwọ akụkọ ịhụnanya
Ihe osise nke Sir Walter Scott nke Sir Henry Raeburn dere.
Sir Walter Scott hapụrụ ụwa a wee ghọọ anwụghị anwụ na Septemba 21, 1832. O nwere ike ịbụ onye akwụkwọ akụkọ Scottish kachasị mara amara na ama ama n'oge niile, Onye Okike nke akwụkwọ akụkọ ihe mere eme na, n’enweghi obi abụọ, ihe atụ nke Ihunanya Anglo-Saxon narị afọ nke XNUMX. Ọrụ ya dị ukwuu na nke na-akpali akpali abụwo isiokwu nke ọtụtụ mmegharị ihe nkiri nke ahụ emewo ka ọ tọọkwa ịma mma. Na maka ụdị ọhaneze niile. Ivanhoe, Ihe omimi nke Quentin Duward o Rob roy ha abụrụla nsụgharị dịka kpochapụwo dịka nke mbụ ha.
3 Ihe omimi nke Quentin Duward
4.1 Mgbe ahụ ...
Akụkọ banyere ndị dike Wilfredo nke Ivanhoe nke ahụ na-alọta Agha Ntụte ya na Scottish n'ụlọ izute aghụghọ nke a ikpe weghaara site John enweghị ala, nwanne Richard nke ọdụ, bụ otu n'ime akwụkwọ kacha mara amara na sinima.
Ndị anyị bụ ndị afọ ole toro eto na-ekiri ihe nkiri nke Hollywood ọzọ ọlaedo na ha tinyere n'ehihie Saturday. Ma ọ bụrụ na e nwere nke anyị nwere ike ịhụ n’enweghị ike ọgwụgwụ ọ bụ Ivanhoe, mbipute a na-agụgharị Robert taylor, Elizabeth Taylor, Joan fontaine y George sanders na-eduzi ya Richard Thorpe en 1952. Maka ndị anyị hapụrụlarị ihe nkiri sinima na afọ ndị ahụ, anyị ga-aga n'ihu na-ahụ ya ọtụtụ oge ka ọ dị mkpa. Maka ịbụ kpochapụwo.
Akụkọ m na Ivanhoe gara n'ihu na afọ niile. N'ihi na, na ọ bụ na ọ gaferela, m hụrụ onye omee ahụ na-ahụ n'anya nke Britain n'anya Anthony Andrews na -bụ mmadu, onye na-egwuri ya na mbipute nke 1982, duru ya Douglas Camfield maka telivishọn, ebe ha nọkwa James Mason, Olivia Hussey na Sam Nwachukwu. Anọgidere m mmekọrịta mụ na ya na kọleji, ebe m raara onwe ya nye ya otu n’ime ọrụ ndị ahụ maka isiokwu nke History of England na ọrụ nke English Philology. Ruo ugbu a.
Enwere ọtụtụ mmegharị ndị ọzọ, ọkachasị nke eserese iji mee ụmụaka. Dị ka ịmata ihe bụ nke mbụ ITV usoro British na 1958, maka ụmụaka, nke nwekwara dị ka protagonist Roger Moore. Ma n'ezie, ndị BBC enweghị ike ịhapụ kpochapụwo dị ka nke a na na 1997 mere a Ihe omume 6-episode. Ọ bụ kpakpando kasị ukwuu nke ọnọdụ Britain dị ka Steven Waddington, Ciaràn Hinds ma ọ bụ James Cosmo (ikpeazụ abụọ a otú fashionable karịsịa maka ndị hụrụ Egwuregwu nke ocheeze).
Na-eso na kpochapụwo sinima, nke a obere version mara nke ọrụ ọzọ nke Scott, bụ onye a na-amachaghị aha, bịanyere aka na ya David onye nkwado en 1954. Ọ dịkwa ọ entertainụ na anyị zutere ọzọ na King Richard the Lionheart onye, ​​n'oge Agha Ntụte, raara onwe ya nye ịchọ Grail Dị Nsọ. Ọzọkwa anyị nwere George Sander, na site na (ọ bụghị otu ihe ọjọọ) Norman Templar Brian de Bois-Guilbert na Ivanhoe, lee King Richard. Nkedo ahụ agwụla Rex nwanyị, Virginia Mayo na Laurence nyefee.
Ihe omimi nke Quentin Duward
Anyị anaghị esi na Hollywood nke 50s na otu afọ gachara Ọtụmọkpọna 1955Richard Thorpe, obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ọkachamara na njem na ihe nkiri, na-eduzi ọzọ ụdị egwuregwu Scott. O nwekwara ọzọ Robert taylor dị ka protagonist, onye ha na-eso Kay Kendall, Robert Morley na George Cole. Yabụ na ọ fọrọ nke nta ịhụ Ivanhoe ọzọ.
Quentin Durward bụ nwa okorobịa onye Scotland onye e gburu ezinụlọ ya a rụkwara ụlọ elu ya. Ya mere, ọ gawara France ịmalite ndụ ọhụrụ. N’ebe ahụ, nwanne nna ya bụ onyeisi ndị nche nke ndị Scotland na-agba ụta bụ ndị na-ahụ maka ichebe Eze Louis nke Iri na Otu.
Walter Scott enweghị ike ịhapụ na-emetụghị aka na mkpịsị aka ya akụkọ banyere otu n'ime ndị ahụ ndị dike scottish nke na-esochi mkpọtụ William Wallace. Nke ahụ bụ Rob Roy MacGregor, onye a na-akpọ Scottish Robin Hood onye gbalịrị imeziwanye ọnọdụ obibi ndụ nke ndị obodo ya. Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ mmegharị nke na-agaghachi na fim ndị na-adịghị duu, nke kacha mara amara bụ nke o mere 1995 onye nduzi Michael Katon-Jones.
Ha gụrụ kpakpando na ya Liam Neeson, onye Jessica lange, Eric zụrụ, John Igbu y Tim Roth. Ndị nke a mechara rụọ otu n'ime ọrụ ọjọọ ndị a na-enweghị atụ, nke nwere ekele maka onye na-eme ihe nkiri.
Anyị ahụla ha niile? Ànyị na-anọkarị otu?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Walter Scott. Ọtụtụ mmegharị ihe nkiri nke ọrụ ya